Maxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ku biirtay suuqa ganacsiga COMESA? - Caasimada Online
Home Warar Maxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ku biirtay suuqa ganacsiga COMESA?
Maxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ku biirtay suuqa ganacsiga COMESA?
Dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ku biiray suuqa xorta ee Bariga iyo Bartamaha Africa ee COMESA, waxaana shalay heshiiskaas saxiixay Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre.
Sida lagu soo daabacay bogga rasmiga ah ee Ra’isulwasaaraha, saxiixa waxa uu shalay ka dhacay magaalada Lusaka ee dalka Zambia halkaas oo uu ka socday shir madaxeedka COMESA.
Ra’isulwasaare Kheyre ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri “Madaxda ka qayb gashay kulan madaxeedka ayaa dawladda Soomaaliya ugu hambalyeeyay ku-biiridda suuqa Bariga iyo Koofurta Afrika, iyaga oo u ballan qaaday in ay babar istaagayaan dadaallada Soomaaliya ay dib ugu soo ceshanayso maqaamkii ay ku lahayd adduunka”.
Balse maadaamaa shuruudaha ganacsiga uu ka mid yahay in dalalka mid kasta ay caan ku noqdaan wax soo saar u gaar ah, Soomaaliyana aysan hadda jirin wax gaar ah oo ay soo saarto oo ay u suuqgeyn karto dalalka 21-ga ah, ayaanan la ogeyn faa’iidada waqtiga dhow eek u biirista COMESA ay keeni karto.